Robert Lewandowski oo barbareeyay rikoor Taariikhi ah uu horey u sameeyay Cristiano Ronaldo – Gool FM
Robert Lewandowski oo barbareeyay rikoor Taariikhi ah uu horey u sameeyay Cristiano Ronaldo
(Munich) 18 Dis 2021. Weeraryahanka Kooxda Bayern Munich iyo xulka qaranka Poland ee Robert Lewandowski ayaa ku guuleystay inuu barbareeyo rikoor taariikhi ah oo ku diiwaan gashan Magaca Weeraryahankii hore ee Real Madrid, kaasoo hadda ka tirsan Kooxda Manchester United ee Cristiano Ronaldo.
Lewandowski ayaa xalay gool ka dhaliyey kooxda Wolfsburg, taasoo ka caawisay in Kooxdiisa Bayern Munich ay 4-0 ku adkaatay, kulan ka tirsan horyaalka Jarmalka.
Gooldhaliyaha reer Poland ayaa sidaas ku yeeshay 69 gool sanadkan 2021 marka la isku geeyo guud ahaan goolasha uu ka dhaliyey tartammada kala duwan, wuxuuna ku guuleystay inuu rikoorkan ka soo barbareeyo Ronaldo oo horey u heystay.
Rikoorkan uu sameeyay xiddiga 33 jirka ah ee Kooxda Bayern Munich ayaa noqday mid aad loola yaabay, kaddib markii uu ku dhaliyay 69 gool 59 kulan oo uu ciyaaray, isaga oo sanadkan ka sareeya xiddigaha kale ee sida Messi iyo Cristiano Ronaldo, xilli Messi uu dhaliyay 27 gool, halka Ronaldo uu dhaliyay 49 gool.
Si kastaba ha ahaatee, Robert Lewandowski ayaa wali aad uga fog rikoorka uu dhigay laacibka reer Argantina ee Lionel Messi sanadkii 2012 markaas oo uu 91 gool u dhaliyay kooxda Barcelona.
Yeelkeeda, rikoorkan uu dhigay Lewandowski ayaa ku soo beegmaya xilli weli ay sii kordhayaan wararka xanta ah ee ku saabsan mustaqbalka weeraryahanka reer Poland, kaasoo sida uu sheegay wargeyska Bild, aan weli go’aan kama dambeys ah ka gaarin cusbooneysiinta qandaraaskiisa, kaasoo dhacaya June 2023.
Waxaa weli jira hadal heyn ku saabsan Lewandowski inuu raadinayo koox cusub uu ku biiro xagaagan, iyadoo kooxaha sida Paris Saint-Germain ama kuwa ka ciyaara Premier League ay isku dayayaan inay ka faa’ideystaan ​​fursadan.
José Mourinho oo damacsan inuu la soo saxiixdo xiddig ka tirsan kooxda Chelsea